တရုတ် စိတ်ကြိုက် အလူမီနီယမ် သတ္တု ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဂဟေဆော်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူများ |သီဟ
သတ္တုထုတ်လုပ်ရေး အလူမီနီယံတိုင်ကီ၊ အလူမီနီယမ် စက်ပစ္စည်းကိုယ်ထည်၊ အလူမီနီယမ် ပလပ်ဖောင်း။
လုပ်ငန်းစဉ်- ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကွေးခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ သွပ်ပြားပြုလုပ်ခြင်း။
ထုတ်ကုန်များ Sheet Metal Fabricationဘောင်များ၊ ကွင်းကွင်းများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ မတ်တပ်ရပ်များ၊ စားပွဲများ၊ လက်ရန်းများ၊ ကင်များ၊ တွန်းများ၊ အကွက်များ၊ အိတ်များ၊ သတ္တုကိရိယာများ၊ ခြံစည်းရိုးများ၊ တိုင်ကီများ၊ ပလပ်ဖောင်းစသည်တို့
ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးထားသော အခြားထုတ်ကုန်အချို့
လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပလာစမာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကွေးညွှတ်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ တံဆိပ်တုံးထုခြင်း နှင့် စက်ပြုလုပ်ခြင်းများတွင် အထူးပြု ကျွမ်းကျင်သော သတ္တုထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်လုပ်သူ၊ အတွေ့အကြုံ နှစ် 20 ရှိပြီဖြစ်သည်။ပူဇော်ခြင်း။
စိတ်ကြိုက် သတ္တုထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်များ၊weldedframe/bracket/base/post/cabinet/ဟာ့ဒ်ဝဲ/body/စားပွဲ
စက်ပစ္စည်းများ၊ ပန့်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ရေကြောင်း၊ မော်တော်၊ ယာဉ်နှင့် အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် 24 နာရီအတွင်း သင့်အား အကြောင်းပြန်ပါမည်။
သင့်ပုံများ သို့မဟုတ် နမူနာများအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် စံချိန်မမီသော အစိတ်အပိုင်းကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်းသည် အခြားထုတ်လုပ်သူများထက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပါသည်။
ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ ပေးပို့ခြင်းအထိ တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် ခိုင်မာသော နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆန်းသစ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအယူအဆဖြင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော မန်နေဂျာအုပ်စုကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ပါသည်။
1. မေး- မင်းက စက်ရုံလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ကြိုဆိုပါတယ်။
2. Q: မင်းဘာတွေ ထူးချွန်လဲ။
A: စံချိန်မမီသော အော်ဒါများ (မျက်နှာပြင် အမျိုးမျိုးဖြင့် စာရွက်သတ္တု အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ခြင်း။ကောင်းမွန်သောလက်ရာဖြင့် tratment & stainless steel/Aluminium ထုတ်ကုန်များ။
3. Q: မင်းရဲ့အားသာချက်တွေကဘာလဲ။
A: စိတ်ကြိုက်အရည်အသွေးမြင့် & စက်ရုံတိုက်ရိုက်စာရွက်သတ္တုလက်ရာများ၊ သင်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်သည်၊သင်၏ပုံဆွဲခြင်း/နမူနာ/ပုံများကို အလွန်တန်ဖိုးထားပါမည်။
4. Q: မည်သည့်နမူနာရရှိနိုင်သနည်း။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် နမူနာကို ကမ်းလှမ်းရန် ဝမ်းသာပါသည်။
5. မေး- စတော့မှာရှိလား။
A: အများအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အော်ဒါတင်ပြီးမှသာ ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြုလုပ်ကြသည်။မှာယူမှုအများစုကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
6. Q: သင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်စျေးသက်သာတယ်လို့သတ်မှတ်ထားလဲ။
A: တင်းကျပ်သောကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှု၊ တိုက်ရိုက်ကုန်ကြမ်း။ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။စာရွက်သတ္တုသင်္ကသပစ္စည်း၊ ပစ္စည်း၊ အတိုင်းအတာ၊ မျက်နှာပြင် ပြုပြင်မှုပေါ်မူတည်၍ စျေးနှုန်းကွာခြားမှု၊delivery နဲ့ စသည်တို့ ပါရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းသည် လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ယခု ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ကိုးကားချက်တစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကုန်ကျစရိတ်ကို မည်သို့ကယ်တင်နိုင်သည်အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို သင်အမြဲမျှော်လင့်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့် ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ ပေးသွင်းရုံသာမက တရုတ်နိုင်ငံတွင် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်း ဖြစ်လိုပါသည်။ကမ်းလှမ်းမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပုံများနှင့် နမူနာများ ပေးပို့ရန် ကြိုဆိုပါသည်။
ယခင်- အရည်အသွေးကောင်း တရုတ် Inductor ထုတ်လုပ်သူ Ikp အီလက်ထရွန်းနစ်သည် DMC Coil၊ UL/Ce/RoHS လက်မှတ်ရထားသော
နောက်တစ်ခု: စိတ်ကြိုက်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း Stainless Steel ဂဟေဆော်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းများ။
Cnc Sheet သတ္တုကွေး
စိတ်ကြိုက် အလူမီနီယမ် ထုတ်လုပ်ရေး
ပေးသွင်းသူ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောထားသည် အလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ အမျိုးမျိုးသော ပြဿနာများကို ကြုံတွေ့ရပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အမြဲတမ်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသော ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။
By Kay from Sydney - 2017.03.07 13:42
by Margaret from India - 2018.06.12 16:22
စိတ်ကြိုက် လေးလံသော သံမဏိကြိုး...
စိတ်ကြိုက် Stainless Steel Bend...